औपचारिक रुपमा यसरी फुटदैछ नेकपा, कुन नेता कता ? « On Khabar
औपचारिक रुपमा यसरी फुटदैछ नेकपा, कुन नेता कता ?
सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले अन्ततः विभाजनको बाटो पहिल्याएको छ । विभाजनसँगै को कता जालान भन्ने प्रश्न पनी उत्तिकै महत्वका साथ उठिरहेको छ । औपचारिक रुपमा फुट्नुअघी कसैले पनी एकतामाथि असर नपुग्ने भन्दै चर्काे भाषण गरेपनी आन्तरिक जोडघटाउ चलिरहेको छm सम्भवतः मंगलबार नेकपाको लागी अन्तिम दिन हुनेछ ।
“स्थायी कमिटीका बहुमत ९४४ मा २९ जना० सदस्यहरू बसेर संसद् विघटन गरेको अभियोगमा प्रधानमन्त्रीलाई पार्टी अनुशासनको कारबाही गरेपछि फुट त्यहीँबाट सुरु भयो,” उनी भन्छन् ।
सोमबार दिनभर के भयो रु
कानुनविद्हरूलाई भेटेलगत्तै प्रचण्ड–नेपाल समूहले संसद्को ल्होत्से हलमा विघटित प्रतिनिधिसभा सदस्य र राष्ट्रियसभा सदस्यहरूको भेला राखेका थिए । उनीहरूले यसलाई संघीय संसदीय दल ९दुवै सदनको सांसदहरूको संयुक्त भेला० को बैठक नै जिकिर गरे ।
“आकस्मिक मन्त्रिपरिषद् बैठक राखिएको सूचना पाएपछि म ओलीजीसँग छलफल गर्न बालुवाटार गएँ,” प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै नेकपा नेतृ रामकुमारी झाँक्रीले भनिन्, “म पुग्दा मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु भइसकेको थियो । उता निवासतर्फ शङ्कर पोखरेल र सुवास नेम्वाङसँग छलफल गर्दै थियौँ । उहाँहरूले पनि मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले अध्यादेश फिर्ता लिने एकमात्र निर्णय गर्ने बताउनुभयो । तर, मन्त्रिपरिषद् बैठक सकिँदानसकिँदै एकजना मन्त्रीले त्यहीँबाट संसद् विघटन गर्ने सिफारिस गर्ने निर्णय भएको एसएमएस पो पठाउनुभयो १ यसरी ओलीजीले छलछाम गर्नुभयो । हामी सबैलाई झुक्याउनुभयो ।”
–नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा०लाई गत आम निर्वाचनमा नेपाली जनताले दिएको मत, प्रकट गरेको विश्वास र पार्टीको सिद्धान्त, नीति र प्रक्रियालाई कुल्चँदै प्रधानमन्त्री तथा संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले स्वेच्छाचारी किसिमले हठात् प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्ने कार्यको यो बैठक भर्त्सना गर्दै निन्दा गर्दछ ।
सोमबारको बैठकमा विघटित प्रतिनिधिसभाका ९० जना र राष्ट्रियसभा २४ जना सांसद्हरूले उपस्थिति कागजमा हस्ताक्षर गरेको देव गुरूङको भनाइ छ । सोमबार नै प्रचण्ड–नेपाल समूहले लीलामणि पोखरेललाई निर्वाचन आयोगमा पठाएर प्रधानमन्त्री ओलीलाई कारबाही गर्ने सिफारिस गरेको पत्र दर्ता गराएको छ । फाइल तस्बिर १२ खरीबाट